Eyona eReader ilungileyo onokuyithenga, unokukhetha njani kakuhle? | Zonke iReaders
Ngaba ufuna eyona eReader? Namhlanje kwintengiso zininzi iincwadi ze-elektroniki esinokuzithenga, kodwa ngelishwa ukuthenga i-eBook kuhlala kungangomsebenzi olula kwaye nabani na angayenza ngempumelelo. Ke namhlanje ngeli nqaku siza kukucebisa kwaye sikunike imiyalelo yokuthenga eyona eBook kwaye ungafi uzama.
Ukuba ucinga nge thenga oyena mfundi utyayo, Thatha usiba kunye nephepha okanye ithebhulethi yakho, ukuze uqaphele yonke into esiza kukubonisa yona ngezantsi kwaye eya kukunceda kakhulu ukuba ukhethe eyona ncwadi ifanelekileyo ye-elektroniki ehambelana neemfuno zakho. Ukuba ufuna ukuya kwinqanaba, jonga kule tafile:
Elona xabiso liphezulu
Uhlobo lweOasis, ngoku nge ... Jonga umnikelo Akukho mveliso ifunyenweyo Akukho mveliso ifunyenweyo Jonga umnikelo
UKobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... Jonga umnikelo
IIMBALASANE	 Ubomi bebhetri obulunge kakhulu ngecala elikhethekileyo eliyilwe yiAmazon. Eyona modeli intsha yohlobo lwe Kindle.	 Olu luhlobo olungekho kwi-no. 1 yentengiso ngokunxulumene kwayo nomgangatho kunye nexabiso elamkelekileyo nelilungelelanisiweyo.	 Ixhasa i-ePub ngokungagqibekanga, into enqwenelekayo yokufunda iincwadi zasimahla kwi-Intanethi. Kwaye ukumelana namanzi.
KULUNGILE	 Isixhobo esilula kakhulu esinamaqhosha okuvula amaphepha, isikrini sokuchukumisa, ubomi bebhetri obunomtsalane. Iza nenketho yeWIFI, okanye iWIFI + 3G enokukhanya okuhlangeneyo.	 Inayo yonke into oyifunayo ukuze ube ngumfundi we-ebook olungileyo kwimakethi yanamhlanje: ukukhanya, iWi-Fi, isikrini sokuchukumisa, ukuzimela kakuhle kunye nobunzima bokukhanya.	 Inezinto ezingaphezulu okanye ezingaphantsi kunaleyo i-Kindle inokuba nayo. Kodwa into exhaswa ngokuthe ngqo yi-ePub ibalulekile kubafundi abaninzi.
OKUBI	 Kuyo yonke into enayo, kunokuqatshelwa ukuba isikrini sayo sincinci kakhulu. Kwaye icala lesibini elisezantsi lixabiso eliphezulu.	 Abanye abafundi bemveli abakasetyenziswa kwiphepha elektroniki kwaye bakhalaza ukuba ayililo iphepha. Kulungile.	 Ibhetri ayihlali ixesha elide njengoko uchazayo. Kwaye ixabiso liyabiza ngokuthelekisa i-Kindle Paperwhite.
ISIQINISEKISO	 Ukuba ufuna ukuba nomfundi we-ebook onokuthenjwa ngaphandle kokucinga kakhulu ngexabiso, emva koko i-Kindle Oasis yeyona ndlela ilungileyo.	 Kuvavanyo lwabathengi abangama-6.300 +, linamanqaku aphakathi kwe-4,5 / 5, ke oku kuthetha konke ukuba sisiphelo esifanelekileyo.	 Umfundi we-ebook olungileyo ukuba abe yenye indlela eya ku-Kindle kuba ayinguye wonke umntu oyithandayo efanayo.
1 Ezona ziReaders zibalaseleyo
1.1 Uhlobo lweWebhuwwhite
1.2 Uhlobo oluSisiseko
1.3 Uhlobo lweOasis
1.4 IKobo Aura H20
1.5 Amandla eReader Pro
2 Uyikhetha njani eyona eReader ibalaseleyo?
2.1 Umboniso we-EReader
2.3 Uqhagamshelo lweWiFi okanye 3G
2.4 Uyilo kunye ne-ergonomics
2.5 Isichazi-magama esihlanganisiweyo
Nje ukuba sazi ezinye zezinto eziphambili ekufuneka sizithathele ingqalelo xa uthenga i-eBook, siya kuphendula umbuzo wokuqala ukuba yeyiphi eyona eReader ibalaseleyo. Ukwenza oku, siza kuvavanya ezinye zeefayile ze- eyona eReaders esinokuyifumana kwimarike;
Kwabaninzi Akukho mveliso ifunyenweyo Yincwadi ye-elektroniki egqibeleleyo kuba idibanisa kwifowuni enye yonke into efunekayo ukonwabela ukufunda kwaye inokuthengwa ngexabiso elingaphantsi okanye elingabizi kakhulu kuye nawuphi na umsebenzisi.
Ngokombono wethu othobekileyo Sijongene nesixhobo esigqibeleleyo, njengoko sonke sisazi, ii-eReaders zeAmazon zisebenzisa ifomathi yazo ye-eBook, ethi kwizinto ezininzi ithintele ukukhetha kwethu kwaye kwezinye kube nzima ukuhlala kwethu kwihlabathi lokufunda kwidijithali.
Okulandelayo siza kwenza uphononongo oluncinci lweempawu eziphambili kunye nokubalulwa kwePhepha lePhepha lePhepha;
Umboniso we-6-intshi ngeteknoloji ye-e-iphepha kunye nokukhanya okuhlanganisiweyo kokufunda, i-300 dpi, itekhnoloji yefonti elungiselelwe, kunye nezikali ezili-16 ezingwevu
Imilinganiselo: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Ubunzima: 206 gram
Imemori yangaphakathi: 4GB
Ifonti yeNcwadi, ekhethekileyo kwiAmazon kwaye yenzelwe ukufundwa ngokulula nangokukhululekileyo
Ukubandakanywa kokufundwa kwephepha lohlobo lweFlip oya kuthi uvumele abasebenzisi ukuba batyibilikise iincwadi ngephepha, tsiba ukusuka kwisahluko ukuya kwisahluko okanye ude uye esiphelweni sencwadi ngaphandle kokulahlekelwa yindawo yokufunda
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Kindle Paperwhite yenzelwe uninzi eyona eReader ibalaseleyo kwintengiso.
Okokugqibela asinakulibala Uhlobo, ngoku ngokukhanya ..., Esinika into efanelekileyo kwaye iyimfuneko ukuze sikwazi ukufunda iincwadi zedijithali ngexabiso eliphantsi kakhulu kwaye nawuphi na umsebenzisi angacinga ngaphandle komzamo omkhulu. Akufanele silindele okuninzi kule eReader, kodwa ukuba sijonga into esisiseko kwaye esivumela ukuba sifunde, olu hlobo lunokuba sisisombululo esifanelekileyo.
Ezi ziimpawu eziphambili kunye nokubalulwa kolu hlobo lusisiseko;
Imilinganiselo: 169 x 119 x 10,2 mm
Ubunzima: 191 gram
I-1 GHz iprosesa
Ukugcinwa kwelifu: simahla kwaye asinamda kumxholo weAmazon
Thenga eyona eBook ilungileyo Ayingomsebenzi olula, kodwa siyathemba ukuba ngengcebiso esikunike yona kweli nqaku kunye neemodeli esikubonise zona, iyakuba yinto elula kuwe. Yeyiphi incwadi ye-e yeyona ibalaseleyo kuwe? Ukuba ufuna into enexabiso eliphantsi, sikwanokukhetha kunye neyona ibalaseleyo iincwadi ze-e zexabiso eliphantsi.
El Uhlobo lweOasis, ngoku nge ... Kusenokwenzeka ukuba yi-eReader enoyilo olungcono esinokuthi silufumane kwimarike kunye neempawu kunye neenkcukacha ezichaza ngaphezulu kwaso nasiphi na esinye isixhobo. Yenziwe yiAmazon, mhlawumbi inqaku layo elibi kuphela lixabiso layo, oko kukuthi liphezulu kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali olungaphezulu okanye oluqhelekileyo.
Emva koko siza kuphonononga Ukucaciswa okuphambili kwale Kindle Oasis;
Iscreen: sidibanisa isikrini esine-intshi ezi-7 kunye nonobumba we-e-papper iteknoloji, ukuchukumisa, ngesisombululo se-1440 x 1080 kunye nee-pixels ezingama-300 nge-intshi nganye
Imilinganiselo: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Enye yeembekiselo ezinkulu zentengiso zizixhobo zeKobo, eziphuculweyo kule minyaka idlulileyo kwaye zikwinqanaba elifanayo neAmazon, nangona okwangoku ingenalo igama nokuthandwa kweAmazon. Inkqubo ye- UKobo Aura H2O umnyama Olunye lweempawu zokuba uKobo wenza izinto kakuhle kakhulu.
Kwaye le ncwadi ye-elektroniki inezimpawu ezithile, esiya kuthi siyiqwalasele apha ngezantsi, eya kusivumela ukuba sikonwabele ukufundwa kwidijithali ngendlela enomdla ngakumbi.
Imilinganiselo: 179 x 129 x 9,7 mm
Ubunzima: 233 gram
Iscreen esingu-6,8-intshi ngesisombululo se-1430 x 1080 pixels, Itekhnoloji yeeleta kunye ne-265 ppi
I-1.700 mAh Li-On ibhetri
Ukumelana namanzi kunye nothuli enkosi kwi-IP-67 yesatifikethi
UKobo Aura H2O umnyama
Amandla eReader Pro
Ukuba sikhangela i-eReader esibonelela ngeenkcukacha ezithile ezinomdla kwaye sinokuyifumana ngexabiso elingaphantsi okanye elincinci, ukhetho olukhulu kunokuba lolo Isistim yamandla eReader ..., eyenziwe yinkampani yaseSpain i-Energy Sistem.
Nge Uyilo ngononophelo, ukukhanya okudityanisiweyo kunye nokubonakala kwento eneenguqu 4.2.2 ye-Android Njengenkqubo yokusebenza, esi sixhobo sinokulungela wena osanda kungena kwihlabathi lokufunda kwidijithali.
Apha ngezantsi sikubonisa ezona mpawu ziphambili kunye nokubalulwa kwale Energy Energy eReader Pro;
Imilinganiselo 160 x 122 x 10 mm
Ubunzima beigram ezingama-220
Iscreen se-inki ye-intshi ye-6 intshi ngesisombululo sama-pixels angama-758 x 1024 asinika i-212 dpi kunye namanqanaba angama-16 engwevu. Inokukhanya okuhlangeneyo nokulungelelaniswayo
I-ARM Cortex A9 1.0Ghz iprosesa esembindini
Ukugcinwa kwangaphakathi kwe-8 GB kuyandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-64 GB
I-2.800 mAh ibhetri ye-lithium
Inkqubo yokusebenza ye-Android 4.2.2 Jelly Bean
Ukuba usenamathandabuzo, siza kukubonisa uthotho lweempawu ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uthenga i-eBook ukuqala ukonwabela ukufunda kwidijithali.
Uyikhetha njani eyona eReader ibalaseleyo?
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, isikrini yenye yezona zinto zibalulekileyo kuyo nayiphi na incwadi ye-elektroniki, kwaye kukuba ukuyifunda kuyo siza kuchitha amaxesha amnandi yonke imihla. Kule nto, kubalulekile ukuba une Isikrini sobungakanani obufanelekileyo, sinesisombululo esifanelekileyo kwaye kangangoko kunokwenzeka ukukhanya okwakhelweyoukusukela oko iyakusivumela ukuba sifunde ngendlela entofontofo kwaye ngaphandle kokudinwa okanye ukuhambisa amehlo phantse kuyo nayiphi na indawo.
Kukwabalulekile ukuba sijonge ixesha lokuthenga enye okanye enye incwadi ye-elektroniki ngohlobo lwe-inki ye-elektroniki eyisebenzisayo. Itekhnoloji ye-e-inki yePearl yeyona nto ihambele phambili kwintengiso kwaye ikhoyo kwezona zixhobo zibalulekileyo kwintengiso, kodwa akukho mfuneko yokuqinisekisa ngale nto kuba iyakusivumela ukuba sifunde kakuhle kwaye ibhetri ubomi ixesha elide kunezinye iintlobo zobuchwepheshe.
Isikrini yintliziyo yencwadi ye-elektroniki, ke ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeempawu ekufuneka uzithathele ingqalelo kakhulu xa ukhetha eyona eReader.
Ibhetri ihlala iyinto yesibini ezincwadini ze-elektroniki, kuba enkosi nge-inki ye-elektroniki ubude bayo bulinganiswa ngeeveki, kodwa akufuneki silibale ngayo. Ngaphandle kokuxhomekeka kakhulu kwintengiso yokuba bonke abavelisi benza ukuba ibhetri yesixhobo sakho ihlale iiveki ezisibhozo, Kufuneka sibeke esweni ngokusondeleyo i-mAh yebhetri kwaye sijonge izimvo zabanye abasebenzisi kwi-intanethi.
Kunika umdla ukujonga ukuba loluphi uhlobo lwentlawulo i-eReader enayo ukusukela ukuba inentlawulo ekhawulezayo iya kusivumela ukuba sihlawulise isixhobo ngexesha elifutshane. Oku kunokuba luncedo ngokwenene xa sihamba kakhulu nge-e-ncwadi yethu.
Kunye nesikrini, ibhetri yenye into ebalulekileyo ebusweni be khetha eyona eReader.
Uqhagamshelo lweWiFi okanye 3G
Kubasebenzisi abaninzi oku akuyi kuba yinto enomdla kakhulu, kodwa kwabambalwa iya kubaluleka. Kwaye kunjalo Ukuba i-eReader ineWiFi okanye uqhagamshelo lwe-3G, sinokufikelela ngokulula kumathala eencwadi edijithali okanye kwithala leencwadi esinalo efini.
Kwelinye icala, i-eReader yethu entsha ayinalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano, amathuba ethu xa kufikwa ekufumaneni okanye ekufumaneni iincwadi zedijithali aya kuncitshiswa kakhulu. Kucacile ukuba ukuba sijonge i- Eyona eBookUnxibelelwano kufuneka lugqitywe.
Uyilo kunye ne-ergonomics
Singatsho ukuba ngasemva kufuneka sithathele ingqalelo imiba efana noyilo okanye i-ergonomics. Malunga noyilo Sinokuthathela ingqalelo ukuba ayinazimbombo zibonakalayo okanye ezingasivumeli ukuba sifunde kakuhle.
Kuya kucetyiswa ukuba uvavanye isixhobo ngaphambi kokuyithenga, umzekelo kumhlaba omkhulu, ukujonga ukuba ikulungele na kwaye ayizukungathandeki kangako ukuba ingasivumeli ukuba sifunde, sonwabele iphepha ngalinye.
Kuxhomekeka kwinto esiyifundayo, kunokwenzeka ngakumbi ukuba kufuneka sibe nesichazi-magama esikufutshane ukuze sijonge phezulu kwaye siqonde amanye amagama. Ezinye iincwadi ze-elektroniki sele zinesichazi-magama esakhelweyo, ke ukuba ungumhlobo kwizichazi-magama kwaye uzisebenzisa ngalo lonke ixesha ufunda, jonga ngeliso elibukhali ukuba incwadi ye-elektroniki oza kuyithenga inalo msebenzi.
Ukuba ufikile kule ndawo kwaye usenamathandabuzo, kwesi sixhobo Unokhetho lweeReaders ekunikezeleni ukuze ukwazi ukukhetha eyona ilungele iimfuno zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Eyona eReader
Awukhange uthathele ingqalelo iifomathi zeencwadi abanokuzifunda, kule meko i-kindle ihlupheke kakhulu.
Kukho ezinye iimveliso ezinomdla, njengePocketBook, oyityeshele ngenkohlakalo.
Okokugqibela, uluvo lomntu: abafundi be-Android bayabhetyebhetye, kodwa, ubuncinci kumsebenzisi ophakathi, unzima ngakumbi ukusebenzisa (kwaye ungagqibelelanga) kunesixhobo esenzelwe ukufundwa kuphela.
Phendula ku Patroclo58
Masithi kuyinyani ukuba i-kindle ayiziphathi zonke iifomathi, kuyinyani ukuba ukuguqula incwadi enje ngemfazwe kaTolstoy kunye noxolo ukusuka kwi-epub ukuya kwi-Azw okanye mobi kuthatha malunga nemizuzwana engama-23 ngobukhulu nakwi-PC yam endinayo endala amd 2- undoqo
Kuya kufuneka ulumkele u-Kindle kuba kubonakala ngathi bayicwangcisile ukuphelelwa lixesha kwaye kunzima kubo ukufikelela kwiminyaka emibini yobomi. Emva konyaka omnye (xa isiqinisekiso abasinikayo siphela), bathambekele ekunikezeni iingxaki ezininzi zokusebenza, de kube kuthintelwe ngokusisigxina kwaye kulahlwe kude. Khangela kwi-intanethi "i-kindle lock" kwaye uza kubona.
NGABA UKUGUQUKA KUNGENZELWA EMVA? UKUSUKA KWI-AZW KUYA KWI-EPUB? ENKOSI.
UAlberto Lozano obambe umfanekiso sitsho
Ekhaya sisenomhlobo wesizukulwana sokuqala, othengwe ngeKrisimesi ka-2007, ebalekayo.
Kwakhona i-Kindle 4 esithenge iKrisimesi ka-2011 kwaye, ekugqibeleni, ezimbini zohlobo lwe-paperwhite zathengwa ngo-2012 nango-2013 ngokwahlukeneyo.
Ukusetyenziswa okunikwa lusapho lonke kuyabanzima kwaye inye kuphela iphepha le -qwqwites elithe laphazamisa amatyeli ambalwa asonjululwe ngokulandela imiyalelo efowunini evela eAmazon (inkonzo ebalaseleyo kunye nokukhawuleza kakhulu). Kungekudala emva koko, kwabakho uhlaziyo lwenkqubo kwaye akuzange kubekho zingxaki kwakhona.
Kwelinye icala, ezinye iincwadi (uPapyre kunye nezinye zesizukulwana sayo) ebesizithenga ekugqibeleni ziye kwindawo eluhlaza ngokuyeka ukusebenza zatshintshwa ngu-Kindle.
Uluvo "lokuphelelwa lixesha okucwangcisiweyo" akufuneki luxhatshazwe.
Kukho iimeko ezimbalwa kakhulu apho uhlobo lwengozi luza kuhlala lukhona, ingxaki ihlala isonjululwa ngokukhawuleza. Ngapha koko, kwaye inikwe ubunzima bayo, uninzi lwezixhobo ze-elektroniki zanamhlanje zinokuba nengxaki yokuvimba enokusonjululwa ngokuqala kwakhona okulula.
Phendula u-Alberto Lozano
Yeyiphi eyona ilungileyo yokufunda i-pdf? Ndiphakathi kwamashiya am i-Kobo Aura entsha kodwa ndibone iimvavanyo kwi-YouTube kwaye kuyaphoxa ...
Ababambalwa kakhulu. Ndonwabile ngo-Kindle 3 kwaye ndinoluvo olufanayo nolwakho, de kwaba yile veki yafa ngesiquphe kum, ndiyikhathalele kwaye ndingayisebenzisi kakhulu, mhlawumbi ndifunde incwadi ngenyanga kwaye iyasetyenziswa yamandla asezantsi. Xa ndikhangela ingxaki yam kwi-intanethi, ndiye ndafumana amakhulu amawaka amatyala afanayo, kubandakanya neenkampani ezininzi ezikhethekileyo ekuyilungiseni. Kubonakala ngathi kum "zinqabile" okanye "zichaziwe" iimeko. Ufumana ukuphahlazeka okumbalwa okanye imicimbi yokufa ngesiquphe kuyo nayiphi na into eyaziwayo ye-elektroniki kunakwimibala. Ngenxa yobuninzi bamatyala afana nawam endakha ndadibana nawo, ndinamathandabuzo malunga nomgangatho wohlobo lweAmazon. Okwangoku akukho nto isombulule ingxaki yam, ke ndikhethe ukuthenga ibhetri entsha kwaye ndithandazela ukuba yingxaki leyo. Kwimeko apho ndinyanzelwa ukuba ndithenge entsha, ayizukuba yimveliso yohlobo, ndibonakalisiwe ukuba umgangatho wayo awuthandabuzeki.
Ndicinga ukuba okwangoku kunzima ukubetha ixabiso / umyinge wexabiso elinikwa nguPapwhite. Kuyinyani ukuba kwasekuqaleni ayinakufunda zonke iifomathi… kodwa ukusebenzisa i-Calibri zinokuguqulwa ngokulula zibe kwifomathi ehambelana nohlobo.
Molo molo. Ngaba ingxaki yakho isonjululwe ngokuthenga ibhetri entsha?
Awulilibalanga kuphela iifomathi, kunye nesandi. Akukho namnye usetyenziselwa ukumamela incwadi yeaudiyo okanye umculo ngelixa ufunda kwaye, inyani, ukuba kuya kufuneka ndiphathe iselfowuni okanye ithebhulethi yokuqhagamshela kwi-intanethi, isidlali somculo somculo kunye nesifundi seencwadi ... une-ereader eninzi kwaye ndidibanisa yonke into ngecwecwe
USilvia Trachcel sitsho
Ndinengxaki yokutshaja ibhetri yam ye-ebook papyre 6.1 kwaye isikrini sihlolwe kwisalathiso, ndingathanda ukwazi apho ndingazisa incwadi ye-elektroniki ukuze iphononongwe
Phendula uSilvia Trachcel
Ungandixelela ukuba iincwadi zekhompyuter zisetyenziselwa ukunxibelelana nothungelwano lukawonkewonke lwamathala eencwadi esizwe kwaye uzikhuphele ngokuthe ngqo.
Ndifuna ukuthenga i-e-reader, ngexabiso eliphantsi kangangoko, oku kundivumela ukuba ndifunde i-pdf (hayi njengomfanekiso kodwa njengombhalo) kunye ne-epub kwaye, ukuba kunokwenzeka, ndinokukhetha ukuba neencwadi zomsindo.
Andenzi nto ngaphandle kokufunda uhlalutyo kodwa akukho nto icacileyo kwizimvo zabantu. Umzekelo, ngokwesiqhelo uphononongo lohlobo luthi lulungile ngexabiso elinalo kwaye bafunda i-pdf kwaye injalo, kodwa ke uninzi lwabasebenzisi luthi banika iingxaki ezininzi, ukuba ii-pdf zifunde kuphela njengemifanekiso ke okanye ushiye i jonga ukufunda into encinci okanye kuya kufuneka uye ngasekunene nangasekhohlo ukuze ulingane nomfanekiso kwiphepha.
Ndifundile ukuba i-TAGUS ilungile kodwa kubonakala ngathi ayihambelani neencwadi ze-amazon ...
Ngapha koko, ndilahlekile kakhulu kwaye ndifuna i-ereader kuba ndihlala ndilayishwe ngeencwadi ezininzi: ')
Akukho mfundi uza kukunika iziphumo ezonelisayo ngePDF's. Olona khetho lulungileyo luhlala luguqula iPDF ibe yi-ePub kwiPC.
Ndakhangela into efanayo kwaye ekugqibeleni ndicinga ukuba ndiza kukhetha incwadi ye-lik de Mars ye-Boyue. Iibhokisi zikhulu kakhulu, kodwa ixabiso liphezulu kakhulu.
UIgnacio Nachimowicz sitsho
Kutheni le nto kuvavanyo ngalunye lwee-e-readers ezenziweyo, lishiyiwe ukuba lichaze ukuba elona nani likhulu lemisebenzi esemnatheni ikwifomathi ye-e-pub, engahambelani nohlobo.
Kutheni le nto kungabonakali ukuba, ngenxa yokuba le fomathi yohlobo oluthile kuphela evumayo, umntu unyanzelekile ukuba athenge kuphela imisebenzi yohlobo lwefom, ethengiswa yiAmazon, kwaye, ewe, ayinakulandwa? simahla kwi-intanethi?
Ndiyazi ukuba lonke uguquko olwenziweyo lunokwenziwa kwisiza seCaliber, kodwa kutheni ungangenisi kuloo ngxaki, ukuba uyakwazi ukufunda ngokuthe ngqo kwi-e-pub?
Phendula u-Ignacio Nachimowicz
Kungenxa yokuba ngokusisiseko unakho ngeCaliber ukuguqula iincwadi ngefomathi ye-epub ukuya kwi-mobi okanye kwifomathi ye-azw3, ezizezinye ezamkelweyo.
Ngenxa yeso sizathu, kuvavanyo oluninzi abakhange bayikhankanye, kuba ngeCaliber ingxaki yohlobo lwefomathi iyasonjululwa.
Iincwadi zokufunda ngesiNgesi
Incwadi yesihlanu yeGrey